बाइबलका कथाहरू: राजा हिजकियाहलाई परमेश्वर मदत गर्नुहुन्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
अश्शूरको सेनाले उत्तरको दस गोत्रलाई नाश गरिसकेको छ। त्यहाँका मान्छेहरू धेरै खराब भएको हुँदा यहोवाले त्यस्तो हुन दिनुभयो। अब अश्शूरको सेना दुई गोत्रे राज्यलाई पनि नाश गर्न चाहन्छ।
अश्शूरको राजाले हिजकियाह राजालाई भर्खरै मात्र चिट्ठी पठाएको छ। यही चिट्ठी हिजकियाहले परमेश्वरको वेदीको अगाडि राखेको हो। चिट्ठीमा अश्शूरको राजाले यहोवालाई ठट्टामा उडाएको छ र हिजकियाहलाई पनि आफ्नो हार स्वीकार्नू भनेको छ। यसैकारण हिजकियाहले यसो भन्दै प्रार्थना गर्छ: ‘हे यहोवा, हामीलाई अश्शूरको राजाको हातबाट बचाउनुहोस्। अनि तपाईं मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सबै जातिहरूले जानून्।’ के यहोवाले हिजकियाहको प्रार्थना सुन्नुभयो?
हिजकियाह असल राजा थियो। ऊ इस्राएलको १० गोत्रे राज्यका खराब राजाहरू जस्तो छैन। ऊ आफ्नो खराब बुबा, राजा आहाज जस्तो पनि छैन। हिजकियाहले यहोवाले भन्नुभएका सबै कुरा ध्यान पुऱ्याएर मान्दै आएको छ। त्यसकारण हिजकियाहले प्रार्थना गरेर सिध्याउने बित्तिकै यशैया अगमवक्ताले हिजकियाहलाई यहोवाको यो खबर पठाउँछ: ‘अश्शूरका राजा यरूशलेमभित्र पस्नेछैन। न त त्यसका सिपाहीहरू यरूशलेमको छेउछाउसम्म पुग्नेछन्। तिनीहरूले यो सहरतिर एउटा काँडसमेत हान्नेछैनन्।’
फेरि चित्र हेर त। यहाँ मरेका सिपाहीहरू को हुन्, के तिमी भन्न सक्छौ? तिनीहरू अश्शूरीहरू हुन्। यहोवाले पठाउनुभएको स्वर्गदूतले एकै रातमा १,८५,००० अश्शूरी सिपाहीहरूलाई मार्छन्। त्यसपछि अश्शूरका राजा हार स्वीकार्दै आफ्नो घर फर्कन्छ।
यसरी दुई गोत्रे राज्य बच्छ र केही समयका लागि त्यहाँ शान्ति हुन्छ। हिजकियाह मरेपछि उसको छोरो मनश्शे राजा हुन्छ। मनश्शे र उसको छोरो आमोन दुवै जना असाध्यै खराब हुन्छन्। देशभरि फेरि अपराध र हिंसा बढ्न थाल्छ। राजा आमोनलाई उसको आफ्नै सेवकहरूले हत्या गरेपछि उसको छोरो योशियाह दुई गोत्रे राज्यको राजा बन्छ।
चित्रमा देखाइएको मान्छे को हो र त्यो मान्छे किन संकटमा परेछ?
हिजकियाहले परमेश्वरको वेदी अगाडि राखेको चिट्ठीमा के लेखिएको छ अनि हिजकियाहले के भनेर प्रार्थना गर्छ?
हिजकियाह कस्तो राजा हो र यहोवाले अगमवक्ता यशैयामार्फत कस्तो समाचार पठाउनुहुन्छ?
यहोवाको दूतले अश्शूरीहरूलाई के गर्छन्, चित्र हेरेर बताऊ।
दस गोत्रे राज्यमा केही समयका लागि शान्ति भए पनि हिजकियाह मरेपछि के हुन्छ?
दोस्रो राजा १८:१-३६ पढ्नुहोस्।
अश्शूरीहरूको मुख्य अफिसरले इस्राएलीहरूको विश्वास कसरी कमजोर पार्न खोज्यो? (२ राजा १८:१९, २१; प्रस्थ. ५:२; भज. ६४:३)
विरोधीहरूको सामना गर्नुपर्दा यहोवाका साक्षीहरूले कसरी हिजकियाहको उदाहरण अनुकरण गर्छन्? (२ राजा १८:३६; भज. ३९:१; हितो. २६:४; २ तिमो. २:२४)
दोस्रो राजा १९:१-३७ पढ्नुहोस्।
संकट आइपर्दा अहिले यहोवाका जनहरूले कसरी हिजकियाहले गरेझैं गर्छन्? (२ राजा १९:१, २; हितो. ३:५, ६; हिब्रू १०:२४, २५; याकू. ५:१४, १५)
राजा सनहेरीबले कसरी तीन गुणा हार भोग्नु पऱ्यो र उसले भविष्यसूचक रूपमा कसलाई चित्रण गर्छ? (२ राजा १९:३२, ३५, ३७; प्रका. २०:२, ३)
दोस्रो राजा २१:१-६, १६ पढ्नुहोस्।
यरूशलेममा शासन गर्ने राजाहरूमध्ये मनश्शे सबैभन्दा खराब थियो भनेर किन भन्न सकिन्छ? (२ इति. ३३:४-६, ९)